Notsapainay ny lavitra NES30, mety ho an'ny emulator | Androidsis
NES30, ny lavitra ho an'ny fitaovanao Android izay mampifangaro ny nostalgia amin'ny kalitao sy ny marina
Na dia marina aza izany amin'ny Android misy lalao mahafinaritra, Ny iray amin'ireo tanjaka lehibe indrindra amin'ny rafi-piasan'i Google dia ny emulateur marobe izay mamela antsika hankafy ireo lalao video nanamarika ny fahazazantsika.
Raha tianao ny lalao Retro dia tsy tokony halainao ity NES30 famerenana lavitra, joystick novokarin'i 8BitDo ary izany dia miavaka amin'ny famolavolana azy mifototra amin'ny fifehezana ny console amin'ny birao voalohany an'ny Nintendo.
1 8BitDo NES30, mpandrindra NES ho an'ny fitaovanao Android
3 Mampatsiahy ny taloha
8BitDo NES30, mpandrindra NES ho an'ny fitaovanao Android
Raha vantany vao manokatra ny boaty ianao dia afaka mahita fa ny ekipan'ny 8BitDo dia nitandrina ny vokany tamim-pitandremana manolotra fampisehoana tsy misy kilema fotsiny. Rehefa mijery ao anaty ianao dia mahita ny lavitra, ny torolàlana sy boaty kely roa.
Ny iray amin'ireto boaty ireto dia misy ny tariby USB hampihenana ny fitaovana na hampifandray azy amin'ny solosaina, fa ny iray kosa misy fahagagana mahafinaritra: a Keychain fahatsiarovana nandritra ny 30 taona lasa izay hatramin'ny nanombohan'ny Nintendo ny NES miaraka amin'ireto soratra ireto amin'ny teny anglisy: "Ho fahatsiarovana ny FC nanomboka ny 15 Jolay 1983 ". Etsy andaniny hoy izy "Ho an'ny fahatsiarovana mahafaly tamin'ny andro taloha". Nilaza aho fa izy ireo dia nikarakara ny antsipiriany farany rehetra.
Fa maninona no lazaina hoe FC30 fa tsy NES30? Raha mametraka an'io fanontaniana io ianao dia tsy fantatrao tsara ny tantaran'i Nintendo.. Ny mpanamboatra Japoney dia nandefa ny console tamin'ny 15 Jolay 1983 tao amin'ny faritany Japoney ambanin'ny anarana hoe "Family Computer" na dia nopetahana ny fanafohezana "FamiCon".
Ny fonosana dia efa mampiseho fa ity mpanara-maso ity dia tsy mahafaly fotsiny fa tsy fitaovana hampiasaina hilalaovana fotsiny. NES30 dia fitaovana iray izay hampatsiahy antsika ireo andro voninahitra taloha mamonjy andriambavy sy mamaky piozila sarotra tsy miraharaha ny kalitaon'ny sary, fa mankafy ny filalaovana mampino.
Tsy afaka milaza kely momba ny famolavolana aho. Ireo be purista dia mety mitsikera ny zava-misy fa 8BitDo dia nanisy bokotra fanaraha-maso bebe kokoal, saingy voavela heloka izy ireo noho ny fampidirana bokotra roa eo anoloana sy ny fikafika ambony ahafahanao mankafy lalao maro hafa. Tsy lazaina intsony ny antsipiriany izay azon'izy ireo rehefa mitazona ny endrika sy ny taratasy izay nampiasain'i Nintendo tamin'ny mpanara-maso Super Nintendo, sa tokony hoteneniko hoe Super FamiCon?
Mirefy 122 x 53 x 16 milimetatra, rehefa sambanao ny mpanera NES30 vao hitanao fa ireo bandy ao amin'ny 8BitDo dia tsy nampiasa ny endriny fotsiny fa ny ny famaranana sy ny fikasihana dia tena mitovy amin'ny lavitra tany am-boalohany. Asa tsara amin'ity lafiny ity. Ary koa, satria kely sy mora raisina ianao dia afaka mitondra azy na aiza na aiza.
Eo an-tampon'ny lavitra dia mahita port USB micro eo akaikin'ny LED kely roa isika. Ny seranan-tsambo USB dia tsy natao hofenoina fitaovana fotsiny fa misy 480mAh bateria Li-on izay mampanantena fahaleovan-tena mandritra ny 20 ora sy 1.000 hetsy.
NES30 dia mifanaraka amin'ny Android, Windows, Mac OS ary IOS amin'ny alàlan'ny Bluetooth na mampifandray azy amin'ny tariby USB miaraka amin'ilay boaty. Mikasika ny LEDs, dia fantatr'izy ireo fa nampifanarahinao tsara tamin'ny finday avo lenta ny finday na ny takelakao, ary noho ny toerany dia tsy manelingelina anao mihitsy izy ireo rehefa milalao ianao.
Miaraka amin'ilay baiko dia mahita antsipiriany mahaliana iray hafa koa isika: ny Xtander dock . Ny ankamaroan'ny fanaraha-maso izay mampiditra fanohanana ho an'ny finday avo lenta dia manana olana satria mametra ny fampiasany amin'ny habe iray izy ireo. Amin'ny tranga NES30, ny dock Xtander dia mahaleo tena tanteraka, mifamatotra amin'ny lavitra mba hahafahanao mitondra azy na aiza na aiza ary mahafinaritra izany fanampiana ho an'ny finday avo lenta na takelaka.
Mampatsiahy ny taloha
Na dia ny torolàlana dia amin'ny teny anglisy sy japoney, tsy sarotra ny mahatakatra ny fomba fiasan'ity peripheral 8BitDo ity. Ny fitazonana ny bokotra Start mandritra ny segondra vitsy dia ho hitantsika fa manomboka mitselatra ilay LED manga ary mijanona eo ihany ny fampifanarahana azy toy ny fitaovana rehetra amin'ny alàlan'ny fampiatoana ny safidin'ny Bluetooth amin'ny fitaovantsika. Indraindray dia mangataka kaody pin anao izy, izany hoe 0000.
Raha vantany vao vitanao izany dia ho hitanao fa ny crosshead, na D-Pad, dia ampiasaina hivezivezy amin'ny menus an'ny telefaoninao, ny bokotra X dia ampiasaina hanamafisana, raha toa kosa ny bokotra A sy B maka tahaka ny bokotra aoriana. Raha miorim-paka ny smartphone dia azonao atao ny manamboatra safidy maro amin'ny alàlan'ny fampiharana 8BitDo, ary afaka manao izany aza ianao bokotra efijery sarintany eo amin'ny lavitra NES30, saingy tiako haseho anao ny mampiavaka an'ity fitaovana ity amin'ny finday rehetra mahazatra.
Ny antsipiriany iray hafa dia ny baiko NES30 dia mifanaraka amin'ny lalao maro na dia heveriko fa noho ny famolavolana azy, ary indrindra noho ny crosshead izay mampifandray ny fanaraha-maso, dia mazava ho azy fa mifantoka amin'ny lalao Retro.
Rehefa nanokatra emulator NES sy Super NES maro dia gaga be aho nahita izany bokotra dia namboarina ho azy marina. Na izany na tsy izany, ny hafaliana NES30 dia mamela anao hametraka ny bokiny amin'ny emulator rehetra nefa tsy misy olana.
Fotoana izao hanandramana lalao maromaro, hijerena ny fomba fampisehoana ny lokom-pifaliana NEs30. Raha hiteny fa ny zavatra niainana dia tsy tokony ho tsara. Ny mpanera NES30 dia miasa toy ny landy, ny valin'ny peripheral 8BitDo dia tsy mety. Tsy tsikaritro na oviana na oviana fa miadana izy mamaly.
Ny teboka iray nampiahiahy ahy dia ny lozisialy. Na dia marina aza fa raha ny mikasika azy dia toa mitovy amin'ny fanaraha-maso lavitra tany am-boalohany, Matahotra aho sao hijaly izy amin'ny fotoana filalaovany. Tsy misy zavatra lavitra amin'ny zava-misy. Ny fahitana ny volavola sy ny fahatsapana ny lavitra, ny keychain fahatsiarovana, ny dock hametrahana ny findainao finday na ny takelakao ary ny fofona Retro izay manenika ny andiany manontolo dia tsy maintsy nitady hadisoana aho. Fa tsy hitako io.
Nandinika ny mpanara-maso aho nandritra ny roa herinandro ny crosshead dia miasa mitovy amin'ny andro voalohany. Ny ekipa mpamolavola dia nanome toky fa ny kalitaon'ny lavitra NES30 dia tsy tokony hialona ny tany am-boalohany. Ary farany, tsy maintsy manasongadina antsipiriany tena lehibe iray hafa isika: afaka mampiasa fanaraha-maso NES30 roa amin'ny fitaovana iray ihany isika. Ny bandy ao amin'ny 8BitDo dia nieritreritra ny zava-drehetra.
Ny vidiny? Na eo aza ny kalitaon'ny vokatra, ny lavitra NES30 29.95 euro fotsiny ny vidiny y misy amin'ny loko telo. Ary koa nanomboka tamin'izay Chollomedia, mpaninjara ofisialy ny vokatra any Espana, dia nanao fifaninanana tao amin'ny Facebook izay nananganana vondrona maromaro, inona no andrasana hisoratra anarana?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Fitaovana hafa » NES30, ny lavitra ho an'ny fitaovanao Android izay mampifangaro ny nostalgia amin'ny kalitao sy ny marina
Sintomy izao ny kinova Dolphin Browser vaovao miaraka amin'ny fanohanan'ny teratany ny Flash amin'ny Android Lollipop sy maro hafa
Ny fiverenan'ny kilasika amin'ny Android miaraka amin'ny Star Wars: Knights of the Old Republic